Dhacdooyin Caalamka Xiddigaha La Xidhiidha Oo Sannadka 2020 Ka La Arki Doono
Dhacdooyin Caalamka Xiddigaha La Xidhiidha Oo Sannadka 2020 Ka La Arki Doono
Tuesday January 14, 2020 - 00:12:18 in
Sannadka 2020 ka, waxa la saadaalinayaa in adduunka lagu arki doono tiro ka mid ah dhacdooyin dhif ah oo la xidhiidha xiddiga iyo meereyaasha kala duwan
Warbixin ay shabakadda Aljazeera ka qortay Dhacdooyinkan waxaa ka mid ah:
Dhacdada ugu weyn ee sannadkan la saadaalinayaa waa qorrax madoobaad dhici doona 21-ka bisha Lixaad ee 2020 ka. Qorraxda ayaa maalintan gebi ahaanba madoobaan doonta marka laga reebo wareeg midab dahabiya yeelanaya oo hareeraha ah, kaas oo u ekaan doona fargal.
Habeennada ay 13 iyo 14 tahay bisha laba iyo tobnaad ee sannadkan 2020 ka waxa adduunyada laga arki doonaa fallaadho sida dhibicda roobka cirka uga soo daadanaya oo ah muuqaalka xiddiga u eeg ee cirka ka soo dhaca. Fallaadhan oo saacaddii kasta ay 120 soo dhici doonaan ayaa si fiican looga arki doonaa dhul badan oo adduunka ka mid ah, gaar ahaan dhulka aan magaalooyinka waaweyn ahayn ee xiddiga habeenkii si fiican loo arko.
Fallaadhahani sida ay ku samaysmaan ayaa ah; Dhulka oo marka uu qorraxda ku wareegayo ay marmarka qaar dhacdo in uu jiidho ama dul mara hadhaaga meereyaasha aadka u yaryar ee erey-bixinta juqraafiga lagu yidhaahdo ‘Meere-yare’ ama fallaadhaha loo yaqaanno ‘Seefta cirka’. Hadhaagaas ama burburkaas yar ayaa gubanaya oo soo gelaya atamosfeerkeenna.
Sagaalka bisha saddexaad ee sannadkan 2020 ka wwxaa la filayaa in la arko dhacdada afka ingiriisiga lagu magacaabo ‘Supermoon’ oo ah in dayaxo uu muuqaal ahaan aad uga weynaado inta dabiiciga ah ee aynu u barannay.
Arrintan ayaa ku dhacda dayaxa oo wareeggiisu ku meegbo xariiqda ugu dhow dhulka, taas oo keenta in maalmaha uu dayaxu buuxo (Dhammaystiran yahay) uu u muuqdo in uu aad dhulka ugu soo dhowaaday, iftiinkiisuna uu si aad ah intii hore uga badan yahay.
Isa safidda meereyaasha
Maalmaha 18 ka iyo 19 ka bisha saddexaad 2020 ka waxaa la filayaa in dayaxa iyo meereyaashu ay kulmaan. Meelo badan oo adduunka ka mid ah, qofka xilliga waaberiga eegaa waxa uu indhihiisa ku arki kari doonaa, saf aad u qurux badan oo ay galeen meereyaasha, Farraare, Cirjeex Raage iyo Dusaa oo soo ag degay dayaxa. Waa muuqaal aad u qurux badan oo taariikhi ah ee maalintaas yaanu ku seegin.
Meeraha Farraare waxa uu yeelanayaa midab cas oo qurux badan, meeraha Cirjeex oo midabkiisu caddaan u badan yahay ayaana noqon doona xiddiga ugu dhalaalka badan dhammaantood. Halka meeraha raage oo sida oo kale Saxal loo yaqaannaa uu yeelan doono midab u janjeedha huruud. Laakiin meeraha dusaaga ayaan isaga sida kuwa kale aad loogu arki kari doonin dhinaca laynka muuqaal ahaan ay iska galaan dhulka iyo cirku.
Waxaa xusid mudan in meereyaashu ay habeenkii cirka sida xiddigaha uga ifaan, sababtuna waa ilays noqodka ay sida dayaxa ku samaynayaan iftiinka qorraxda. Iyaga iyaga oo fogaanta awgeed aad u yaryar marka aynu dhulka ka eegayno.
Bisha Saddexaad daawo meeraha waxara-xidhka
Bisha saddexaad ee sannadkan, galabtii marka ay qorraxdu dhacdo waxa aad arki kari doontaa muuqaalka quruxda badan ee meeraha Waxara-xidh (Venus). Muddo laba saacadood ka badan oo qorrax dhaca kaddib ah ayaa uu sii muuqan doonaa meerahan oo aad kari doonto jihada galbeed. Godka qorraxda dushiisa oo uu qorraxda kaga hadhi doono.
Waxa ay bishaasi noqon doontaa marka uu meeraha Waxara-xidh ugu iftiinka badan yahay sannadka oo dhan. Sababtuna waa meeraha oo bishaas aad uga durki doona qorraxda, kaddibna uu ka raysan doono iftiinkeeda xad dhaafka ah ee ilayskiisa dembiya.
Maxaa muhiim ka dhigay?
Marka laga tago in muuqaalladani ay yihiin kuwo taariikhi ah oo macno u samaynaya qof kasta oo doonaya in uu waayo-aragnimadiisa ku daro dhacdooyinka xiddigaha ee dhifta ah. Waxa kale oo ay muuqaalladani muhiim u yihiin carruurta.
Xeeldheereyaasha barbaarinta iyo waxbarashada ubadku waxa ay sheegaan in carruurta oo la tuso dhacdooyinkani ay sababto in u fiirsigooda adduunka ku xeeran iyo dhacdooyinka dabiiciga ahi uu kordho. Taas ayaanay aaminsan yihiin in ay jeclaysiinayso waxbarashada, kana fogeynayso waxyaabaha la aaminsan yahay in ay waxbarashada ka durkiso ee ay ka mid yihiin qalabka elektarooniga ah ee lagu ciyaarsiiyo.